Tantara misongadina tamin'ny Janoary 2010
Voafantina hofidiana hahazo loka Game Changer ny Global Voices Online
Vao voafantina hisafidianana anatin'ny dingana famaranana ao anatin'ny Loka We Media Game Changer 2010 (loka We Media mpanova lalao 2010) ny Global Voices Online. Voafantina ao anatin'ny lisitry ny olotsotra, tetikasa ary fikambanana voafantin'ny valam-piarahamonina ankapobe We Media ny GVO. Hoy manko ny We Media: Mitarika ny olona ho amin'ny...
27 Janoary 2010
Karaiba17 Janoary 2010
Madagasikara13 Janoary 2010
Etiopia: miaro ny kaompaniam-pitaterana Etiopiana taorian'ny fianjeran'ny fiaramanidina ny mpitoraka bilaogy
Etiopia 27 Janoary 2010
Niolomay niaro ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka an'ny fanjakana Etiopiana ny mpitoraka biloagy taorian'ny nianjeran'ny fiaramanidina iray tany akaikin'i Beiruth, fiaramanidina nitondra olona 90 ka maty avokoa izy rehetra. Owen Abroad nilaza fa “tena nalahelo” tamin'ny vaovao navoaka mikasika ny fitaterana an'habakabaka etiopiana Ethiopian Airlines izy, hoy izy: Tena miavaka ny fiarovana...
Tahiti 22 Janoary 2010
Dimy andro aty aorian'ny horohoron-tany namotika ny renivohitry Haiti, Port-au-Prince sy ireo tanàna hafa toa an'i Leogane sy Jacmel, dia mbola sarotra ho an'ny mpamonjy voina sy ireo mpitsabo ny mamonjy ireo mponina sisa tsy maty. Na izany aza anefa, tsy avy amin'ny tsy finiavana hanampy eo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena...
Diplaomaty Toniziana maty noho ny horohorontany tany Haiti
Hedi Annabi, 66 taona, diplaomaty Toniziana sy solontena manokan'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana ho any Haiti (Minustah) dia ahiana ho isan'ireo maty tamin'ny horohorontany mahery nitranga tany Haiti. Malahelo noho ny famoizana azy ireo mpitoraka blaogy Toniziana.